CSO News
Selected Monthly Economic Indicators(January 2016)
Home >> မြန်မာ
စီမံကိန်းနှင့်‌ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ မှ Consulting Services from an International Research Partner to assist the planning, implementation and analysis ofaSME survey in the manufacturing sector to be implemented by the Central Statistical Organization (RFP 2016/CSO/0512 , Deadline 2-1-2017) အတွက် International Research Partner အဖွဲ့ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့်‌ ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖေါ်ပြပါ website များတွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
SDGs Indicators Baseline Report for Myanmar ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် ညွှန်ကိန်းများဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း ရရှိနိုင်မှု အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (SDGs Indicators Baseline Report for Myanmar)အား အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ Stakeholders များနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)ရှိ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ တွင် ယနေ့နံနက်(၉:၃၀)နာရီ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ အပါအဝင် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြ ပါသည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် SDGs Indicators Baseline Report (Draft)တွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ အားလုံးပါဝင်နိုင်စေရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ(UN General Assembly)တွင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များ၏ ရည်မှန်းချက်များသည် မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေး မူဝါဒများနှင့် လည်း ကိုက်ညီပါကြောင်း၊ SDGs Data Assessment Report အား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု ထုတ်ပြန်မည့် SDGs Indicators Baseline Report ထွက်ရှိနိုင်ရန် NSDS Cluster များ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် UNDP ၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် အတူ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်မာအေးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)မှ Ms. Hyeran Kim တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းညွှန်ကိန်းများ အခြေခံအဆင့်အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းစနစ်အား ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)မှ Ms. Marie Dietsch က ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်သည့် တွေ့ရရှိချက်များ ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အုပ်စုခွဲကာ ညွှန်ကိန်းများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အုပ်စုအလိုက် တွေ့ရှိချက်များအား စုပေါင်းဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ ကြပါသည်။
ဒိန်းမတ်-မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၀၁၆ - ၂၀၂၀ အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး
ဒိန်းမတ် - မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၀၁၆ - ၂၀၂၀ အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် (၁) အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး Mr. Peter Lysholt Hansen နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဒိန်းမတ် - မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၀၁၆ - ၂၀၂၀ အကောင် အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဒိန်းမတ် ခရိုနာ သန်း ၄၇၀ ပေးအပ်ရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကိုယ်စား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး Mr. Peter Lysholt Hansen တို့က လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ တစ်ဆင့် အေးချမ်းသာယာပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကား သည့် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ဆောင်ရေးဟူသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဒိန်းမတ် - မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၀၁၆ - ၂၀၂၀ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် ပေးအပ်သည့် အကူအညီများကို လက်ခံခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကဏ္ဍ၊ အခြေခံပညာရေးကဏ္ဍ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများအတွက် များစွာအထောက်အကူ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှ နိုင်ငံစုံကုန်သွယ်ရေး ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပို့ကုန်တိုးတက်ရေး အတွက် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းအချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် သယံဇာတနှင့် အခွင့်အလမ်းများ များစွာရှိနေသော်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း မြင့်မားနေဆဲဖြစ်နေရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် စနစ်ပိုင်းတွင် အားနည်းမှုများ ရှိနေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း၊ အားနည်းချက်များကို အတွေ့အကြုံ စဉ်းစားဝေဖန် ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းများဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း၊ ယခုဆွေးနွေးပွဲမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ပို့ကုန်တိုးတက်ရေးအတွက် တွေ့ကြုံနေသည့် အခြေအနေများကို သိရှိပြီး အခွင့်အလမ်းများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးကြရန် မှာကြားသည်။ ထို့နောက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကဏ္ဍအလိုက် ပြည်ပ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေကို လည်းကောင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က Mirror Statistics ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုစာရင်း ကွာဟမှုများ ဆန်းစစ်ချက်ကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ ငွေကြေးမူဝါဒ ရေးရာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေစည်းမျဉ်းဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြည်ပငွေပေး ငွေယူရှင်းတမ်း ရေးဆွဲ၍ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန်ရငွေများ အပြည့်အဝရရှိမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပို့ကုန်တိုးတက်ရေးနှင့် အမျိုးသား ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်မှုများကို လည်းကောင်း၊ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က မြန်မာနိုငံတွင် ဆီသန့် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် စက်ရုံများ လိုအပ်နေမှုများကို လည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ပို့ကုန်တင်ပို့ရန် အတွက် ထုပ်ပိုးမှုဥပဒေ (Packing Law)၊ အမှတ်တံဆိပ် ဥပဒေ (Certification Law) များ ပြဌာန်းပေးရန် လိုအပ်နေမှုများကို လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပရိဘောဂ ထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများ အသင်းက ပရိဘောဂ လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို လည်းကောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး တင်ပြချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နိဂုံးချုပ် ဆွေးနွေး မှာကြားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့ လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်း၊ တင်ပို့လိုသည့် ထုတ်ကုန်၊ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် အဆိုပြုတင်ပြလွှာများ တင်ပြကြစေလိုကြောင်း၊ သတ္ထုတွင်းထွက်များစွာ ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်နေ သော်လည်း ဈေးကွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းနေကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု၏ စုဆောင်းငွေများကို ငွေကြေးအရင်းအမြစ် တစ်ခုအနေဖြင့် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်၍ ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း၊ ရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်နေသည့် ပို့ကုန်တိုးတက်ရေး နှင့် အမျိုးသား ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာကို အခြေခံကာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှ နိုင်ငံစုံကုန်သွယ်ရေး (Multi National Trade) ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စဉ်းစားဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ (သတင်းစဉ်)
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေးကော်မတီ(၃/၂၀၁၆) အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၈:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များမှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီ နာယက၊ ဒုတိယသမ္မတ(၂) ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူမှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသည် လက်တွေ့ကျသည့် စီမံကိန်းများနှင့် မူဝါဒများမှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်ရန်၊ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်နှင့် သုံးသပ်နိုင်ရန်၊ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များမှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၊ Stakeholders များနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အရည်သွေးပြည့်ဝသည့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်နိုင်မည့် စွမ်းဆောင်မှုရှိသည့် အမျိုးသားစာရင်းအင်း စနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု Statistical Evolution လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ကြီးများ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ(National Strategy for Development of Statistics-NSDS) ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း(၁၂၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီ နာယက၊ ဒုတိယသမ္မတ(၂) ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အခြေခံစဉ်းစားရမည့် စာရင်းအင်းများ တိကျမှန်ကန်မှုမရှိလျှင် မူဝါဒချမှတ်မှုနှင့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲမှုများ မှာယွင်းနိုင်ပါကြောင်း၊ အခြေအနေမှန်များကို အခြေပြုသည့် ကိန်းဂဏန်းများ ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စာရင်းအင်းများသည် လက်တွေ့အခြေအနေမှန်များနှင့် ကင်းကွာမှုမရှိစေရန် အထူးဂရုပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်း ဥပဒေသစ်ကို မူကြမ်းရေးဆွဲပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ လိုအပ်သည့် စစ်တမ်းများ ကောက်ယူရေးအတွက် “မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း” ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခိုင်မာသည့် စာရင်းအင်းများနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် စာရင်းအင်းများ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ကောက်ယူရရှိနိုင်ရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ အရည်အသွေး ပြည့်ဝမှန်ကန်စေရန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေးကော်မတီများ၌ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် ကိန်းဂဏန်း စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကို စုစည်းပြီး စိစစ်သုံးသပ် အကဲဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်မှသာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မူဝါဒများနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်များ မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်သည် မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သူများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန်း ရေးဆွဲသူများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အခြားစာရင်းအင်းသုံးစွဲသူများအတွက် သာမက နိုင်ငံတကာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် စာရင်းအင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည့် အနေအထားတစ်ရပ်အဖြစ် ရောက်ရှိရန် ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေးအတွက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးကြစေလိုကြောင်း ဒုတိယသမ္မတက ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းက လိုအပ်သည့် မူဝါဒများ မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံရမည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန် ညီညွတ်ရေး ဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်က စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝရေး ဆိုင်ရာများကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ ဆက်လက်၍ စာရင်းအင်း အချက်လက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးများနှင့် စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်များက စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူရေး ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီနာယက ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးပြီး နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြား၍အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)
မြန်မာ့ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ရည်မှန်းချက်အသစ်နှင့် ရလဒ်သစ် များဖြင့် အားထုတ်စို့ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
UNICEFမှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr.Bertrand Bainvel မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများမှတ်တမ်းတင် Group Photo ဓါတ်ပုံ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် UNICEF တို့ ပူးပေါင်း၍ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ ပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် “မြန်မာ့ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ရည်မှန်းချက်အသစ်နှင့် ရလဒ်သစ်များဖြင့် အားထုတ်စို့” (New Vision, New Results for Children in Myanmar) အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ရက်နေ့ နံနက်(၈:၃၀)တွင်နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးများ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများမှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ စီပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ စာရင်းအင်းပညာရှင်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO နှင့် INGO များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင်ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြ ပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာ့ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ရည်မှန်းချက် အသစ်နှင့် ရလဒ်သစ်များဖြင့် အားထုတ်စို့ ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ဆောင်ရွက်သင့်သည် အချိန်အခါပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၅၂.၄ သန်းကျော် ရှိသည့်အနက် ၃၅% သည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ဖြစ်သော ကလေးများဖြစ်သည့်အတွက် ကလေး သူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် မဟာဗျူဟာ စီမံချက်များထားရှိရန် အလွန်ပင်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်(၁၇)ခု ကို လက်ခံဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရရှိနိုင်ရေး အတွက် စီးပွားရေးမူဝါဒ(၁၂)ချက်ကို ချမှတ် ကျင့်သုံးနေပြီး သိသာထင်ရှားသည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အခွင့်အလမ်းများရရှိအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ အစိုးရသစ်အနေဖြင့် ပြည်သူတို့၏ဘဝတိုးတက် အောင်မြင်သောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အရေးများ ရရှိသကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများလည်း ကြုံတွေ့နေရပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားကောင်း လာစေခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပသည့် အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသည် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး အတွက် ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အကြံပြု တင်ပြချက်များ ရရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် UNICEF မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr.Bertrand Bainvel မှ ဆွေးနွေးပြောကြားရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ အခြေအနေကို ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများအရ ကလေးသူငယ် ၅၀% သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ၅နှစ်အောက် ကလေးဦးရေ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ ကြား နေ့စဉ် သေဆုံးနေပါကြောင်း၊ ကလေးသူငယ် ၃၀% သည် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မရရှိခြင်း နှင့် ၂၀% သည် အိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်မှုမရှိပါကြောင်း၊ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ၏ ၂၅% ဖြစ်သော ၃.၆ သန်းသော ကလေးများသည် ကျောင်းနေနိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်းဆွေးနွေး ပြောကြား ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ကလေးသူငယ်များနှင့် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ၏အသံ ”A new Myanmar for us” Presentation အား ဗီဒီယိုဖိုင်ပြသပြီး၊ UNICEF မှ Policy Advocacy Officer ဒေါ်ဂျီလီယံ စန်းစန်းအေး မှ ကလေးသူငယ်များ၏အခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ Dr. Aniruddha Bonnerjee မှ “Presentation of latest set of data and analysis on children what it mean for Myanmar” ကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။
ထို့နောက် ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးပွဲများကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ “Ensuring the best start in life for every child” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ “Meeting the right to quality education for every child” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်မှ“ Protecting the right of children in conflict with the law, child victims and witnesses, including in contexts of violence, trafficking and exploitation” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ “Reducing social and economic vulnerabilities of children: The role of Social Protection, Child Protection and DRR”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နေ့လည်ပိုင်းတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းမှ ဦးဆောင်၍ “Creating the enabling environment: The conditions for the vision to becomeareality” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် မူဝါဒနှင့် အကြံပြုတင်ပြချက်များမှ ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သော ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် SDGs ရည်မှန်းချက်တွင် ပါဝင်သည့် ကလေးသူငယ် ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ညွှန်ကိန်းများကို လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ရီရီစိန် မှ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် Planning Approach ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း ၊ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြတ်ကျော် မှ Myanmar’s Budget Situation and Social Budget Allocation ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းဇော်မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များထံမှ Child related SDGs စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး၊ Monitoring and Evaluation ကိစ္စရပ်များအတွက် အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့် နည်းပညာ အကူအညီရရှိရေး ကိစ္စရပ်များကို လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး နော်လှလှစိုးမှ ကလေးများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသည့် Amyotha Hluttaw Women and Child Rights Committee ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။
ထို့နောက် ဆက်လက်၍ ကဏ္ဍ(၄)ခု မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် မူဝါဒနှင့် အကြံပြုတင်ပြချက်များအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမြင့်မြင့်သန်းမှ ကလေးတိုင်း၏ ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးစတင် နိုင်ရန် အတွက် ကျောင်းများတွင် ကိုယ်ကာယ ပညာပေးလေ့ကျင့်ချိန်များထားရှိရေး၊ ကလေးများ အဟာရပြည့်ဝစေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတသည့် အစားအစာများ ရရှိနိုင်ရေး စသည့် လိုအပ်ချက်များအကြောင်းတင်ပြခြင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကလေးများဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ သာယာလှပစေရန် ပညာရေးကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အခြေခံပညာသင်ယူရရှိနိုင်ရေး၊ နည်းပညာနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာများ သင်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ အကြောင်း တင်ပြခြင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ ကလေး သူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအကြောင်း တင်ပြခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစန်းစန်းအေးမှ မြန်မာ့ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ရည်မှန်းချက် အသစ်နှင့် ရလဒ်သစ်များဖြင့် အားထုတ်စို့ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကလေးများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်၊ လူမူရေးအလုပ်သမားများနှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်သားများအား လေ့ကျင့်ပညာပေးရန် လိုအပ်ချက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကလေးများ၏ဘဝ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် စောင့်ကြည့်လေ့လာ အကဲဖြတ်မှုများ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများနှင့် ဖွား/သေ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များဖြစ်သည်. ဖွား/သေမှတ်ပုံတင်ခြင်း(Vital Registration)၊ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ခြင်း(Civil Registration)တို့ လိုအပ်ပါကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ “မြန်မာ့ ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ရည်မှန်းချက်အသစ်နှင့် ရလဒ်သစ်များဖြင့် အားထုတ်စို့” ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သော ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲသည် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် အတွက် လိုအပ်သည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် သုံးသပ် တင်ပြချက်များ၊ အကြံပြုချက်များဖြင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး ဆွေးနွေးပွဲအား ညနေ၆:၃၀နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
အဌမအကြိမ် စာရင်းအင်းကဏ္ဍ အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ (Sectoral Working Group on Statistical Quality Development)အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ အကြားတွင် စာရင်းအင်းအရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဌမအကြိမ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၄)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စာရင်းအင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြ ပါသည်။	စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်မှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် နေပြည်တော် သဘောတူညီချက်အရ စာရင်းအင်းကဏ္ဍ အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်အထိ စာရင်းအင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အားလုံးဝိုင်းဝန်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ (National Strategy for Development of Statistics −NSDS) အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကိစ္စရပ်အား အစိုးရသစ်မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သြဂုတ်လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကော်မတီ အစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ အသီးသီးတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနများအလိုက် ဦးစားပေးနယ်ပယ် သတ်မှတ်မှုအရ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ တိကျ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဒေါင်လိုက်ရော အလျားလိုက်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ယန္တယားလည်ပတ်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ သတ္တမအကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကိုလည်း ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသည် စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ (National Strategy for Development of Statistics−NSDS)အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် Project များနှင့် စာရင်းအင်းကဏ္ဍလုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင် ကဏ္ဍစုံဘက်စုံ အပြန်အလှန်အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေရေးနှင့် တာဝန်ယူမှုများဖြင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် Project များနှင့် လာမည့်နှစ်အတွင်း စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဌမအကြိမ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးခေါ်ယူ ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် UNFPA မှ တွဲဖက်ဥက္ကဌ Mr. Fredrick Oyawo က စာရင်းအင်းအရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်များ ကိုယ်စား အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့၏ လတ်တလောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအနေဖြင့် စာရင်းအင်းအရည်အသွေး ပြည့်ဝရေးကော်မတီ (၂/၂၀၁၆) အစည်းအဝေး ရလဒ်နှင့် အောင်မြင်မှုများ၊ စာရင်းအင်းဥပဒေ ပြဌာန်းရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ(NSDS) ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ(SDGs)အတွက် အညွှန်းကိန်းများရရှိနိုင်မှုအခြေအနေ၊ မြန်မာစီးပွားရေးစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာတင်ပြမှု၊ မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း ဒုတိယအကြိမ် Pilot စစ်တမ်း ကောက်ယူရရှိခြင်း အခြေအနေများ၊ စာရင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများအနေဖြင့် WFP နှင့် ပူးပေါင်း၍ Training on Mobile Data Networking ( Mobile Data Collection, GIS) သင်တန်း၊ WWF နှင့် ပူးပေါင်း၍ Environment Accounting သင်တန်း၊ PARIS21 နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းအင်းစနစ်အပေါ် သုံးသပ်သည့် Peer Review အစီရင်ခံစာ၊ Bloomberg နှင့် ပူးပေါင်း၍ Verbal Autopsy Survey စစ်တမ်းများ စသဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား သတ်မှတ်ပြီး အစည်းအဝေးအား မွန်းတည့် ၁၂:၀၀နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)
ကနဦး လိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၃၀
အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၆)တွင် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြိုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို့ ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။ ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကနဦး လိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို လိုအပ်သည့် ဌာနများဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန်၊ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကနဦး လိုအပ်ချက်များ၊ ရေရှည်အတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကော်မတီတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနများ ပါရှိရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း၊ ကြက်ခြေနီ၊ မီးသတ်၊ ရဲနှင့် တပ်မတော်တို့မှလည်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု စာရင်းတွင် သာသနိက အဆောက်အအုံများ၊ ဘုရားများ ပါဝင်လာပါက သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများဖြစ်ပါက ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် သဘာဝဘေး အမျိုးအစား အလိုက် Disaster Risk Map နှင့် Disaster Management Plan ကိုရေးဆွဲထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များတွင် ရေကြီးခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မြေငလျင် လှုပ်ခြင်း၊ တောမီးလောင်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ အပူလှိုင်း၊ အအေးလှိုင်း ကျရောက်ခြင်း၊ မိုးခေါင်ရေရှားခြင်း၊ မိုးသီးကြွေကျခြင်း၊ ဆူနာမီ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့် သဘာဝဘေးများသာမက လူတို့၏ ပယောဂကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် မီးလောင်ခြင်း၊ တံတား ပြိုကျခြင်း၊ အဆောက်အဦးပြိုကျခြင်း၊ ဗုံးပေါက် ကွဲခြင်း၊ သင်္ဘောနစ်မြှပ်ခြင်း နှင့် ယာဉ်တိုက်မှု စသည်တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အသီးသီး အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ရေရှည်ကောင်းမွန်စေရေး အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ထားရန်နှင့် အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များ ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်စေရေးအတွက် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုကို အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်း အတည်ပြုနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အတွက် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူရန်အတွက် (၁/၂၀၁၆) အစည်းအဝေး တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုပါကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေး နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)တွင် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ မှ တာဝန်ရှိသူများက ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)
ကနဦးလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၁၄
အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း၊ အမျိုးသား သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီအောက်ရှိ ကော်မတီများမှ အတွင်းရေးမှူးများ၊ ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေး နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ ကနဦးလိုအပ်ချက်များ စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံကိုသာမက ကမ္ဘာကိုပါ စိန်ခေါ်နေပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက် ရင်ဆိုင်မည်ဆိုသည်မှာ အရေးကြီးကြောင်း၊ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းတို့သည် မြန်မာတို့၏ သဘာဝဖြစ်ရာ အန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့လာပါက ပို၍ပင် ကူညီစောင့်ရှောက် လာကြကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များကို နှစ်စဉ်လိုလို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ကူညီ စောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များစွာ ရှိသော်လည်း ကူညီစောင့်ရှောက်မည်ဆိုသည့်စိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက လုပ်ငန်းများ လျှင်မြန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်း အရေးကြီးကိစ္စတစ်ရပ် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တက်ရောက်လာသူများ အနေဖြင့် နိုင်ငံအကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အကြံပြု ဆွေးနွေးကြရန် ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ ကနဦးလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းကောက်ယူရေး၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေး နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဝါဝါမောင်က ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့များအတွင်းရေးမှူးများ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ အတွင်းရေးမှူးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများက ဝိုင်းဝန်းအကြံပြု တင်ပြကြသည်။ (သတင်းစဉ်)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်းဆန်စားသုံးမှုစစ်တမ်း ကောက်ယူထားရှိမှု အခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအခမ်းအနား
(စက်တင်ဘာလ ၁ရက်၊ နေပြည်တော်)
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ညီနောင်အသင်းဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၏ ကြီးကြပ်ပူးပေါင်းကူညီမှုအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူတစ်ဦးချင်း ဆန်စားသုံးမှုစစ်တမ်း ကောက်ယူထားရှိမှု အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသိင်္ဂီမြင့်မှ ဦးဆောင်လျက် သုတေသနစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု အတွေ့အကြုံများနှင့် ရရှိလာသောသတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁) နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ သင်တန်းခန်းမတွင်ကျင်းပရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်မာအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ စစ်တမ်းဌာနစိတ်နှင့် လယ်ယာ၊ သားငါးနှင့် သစ်တောဌာနစိတ်မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော အစားအစာဖူလုံမှုဆိုင်ရာ Food Balance Sheet ( Training Workshop of Preparing for Food Balance Sheet) သင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင်သူ Mr. Hemraj တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ သုတေသနစစ်တမ်းကို နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်(၁၄)ခု တို့တွင် မြို့နယ်ပေါင်း (၁၄၈) မြို့နယ်ရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၁၃၂) စုတွင် ကိုယ်စားပြုသူလူဦးရေ (၂၄၂၁၁) ဦးတို့ထံမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသိင်္ဂီမြင့် ဦးဆောင်သည့် သုတေသနအဖွဲ့နှင့်အတူ မဟာဘွဲ့၊ စတုထ္ထနှစ်နှင့် တတိယနှစ် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း (၁၅၃) ဦးမှ စာရင်းကောက်များအဖြစ်ပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၏ အကူအညီဖြင့် ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုစစ်တမ်းအားလည်း ဆက်လက်ကောက်ယူသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အစားအစာဖူလုံမှုဆိုင်ရာ Food Balance Sheet (FBS) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
နေပြည်တော် သြဂုတ် လ ၃၀ ရက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့(FAO)တို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃၀)ရက် နေ့တွင် အစားအစာဖူလုံမှုဆိုင်ရာ Food Balance Sheet (FBS) သင်တန်းကိုနေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၃၂)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါ၀ါမောင်မှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) Mr. Hem Raj Regmi Consultant(Statistician) မှ Food Balance Sheet နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် ဆက်စပ်ဌာန(၈)ခုမှ သင်တန်းသား (၁၅)ဦးအပါအ၀င် သင်တန်းသား(၂၅)ဦးတက်ရောက်ပြီး (၃၀ -၈-၂၀၁၆ )ရက်နေ့ မှ (၂-၉-၂၀၁၆ )ရက်နေ့အထိ (၄)ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အစားအစာဖူလုံမှုဆိုင်ရာ Food Balance Sheet (FBS) တွက်ချက်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း ကောက်ယူရန် ကိန်းဂဏန်း အသုံးပြုသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော် သြဂုတ်လ ၁၇
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် (World Bank)၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်း (Myanmar Living Conditions Survey-MLCS) (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ကို ကောက်ယူနိုင်ရန် ကိန်းဂဏန်း အသုံးပြုသူများနှင့် ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းအင်းပညာအသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ မြန်မာ့စစ်တမ်းသုတေသနအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း (၁၅၀) ဦးတက်ရောက်ကြသည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ကောင်းမွန်သော ကိန်းဂဏန်းများနှင့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များသည် လူမှုအသိုင်းအဝန်းရှိ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သူများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စာရင်းအင်းများ တိကျမှန်ကန်ရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရ၍ တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိမှသာလျှင် ရည်မှန်းထားသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အချိန်မီ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်သို့ အောင်အောင်မြင်မြင် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များသည် သုံးစွဲသူအပေါ်မူတည်၍ တန်ဖိုးရှိကြောင်း၊ကောင်းမွန်သော စစ်တမ်းတစ်ခုမှရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက် အလက်များသည် သုံးစွဲသူများကို ထိရောက်မှု ဖြစ်စေကြောင်း၊ မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် စာရင်းအင်း အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးအတွက် ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ အထောက်အကူပြုမည့် လိုအပ်သော အခြေခံအချက်များကို ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်း (Myanmar Living Conditions Survey - MLCS) (၂၀၁၆-၂၀၁၇)သည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် နေထိုင်မှု အခြေအနေများအား သိရှိနိုင်ရန်၊ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း(CPI) တွက်ချက်ရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် (Sustainable Development Goals - SDGs) အတွက် လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များနှင့် ညွှန်ကိန်းများ ရရှိနိုင်ရန်၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် (System of National Accounts - SNA) တွက်ချက်ရန်၊ စားသုံးမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် မူဝါဒများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကောက်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းစနစ်အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။
UNDP နှင့် World Bank တို့မှ စာရင်းအင်းပညာရှင်များကလည်း ကိန်းဂဏန်း အသုံးပြုသူများနှင့် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာတို့ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများမှ စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာကို အုပ်စု(၄)စု ခွဲ၍ အုပ်စုအလိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။
ထို့နောက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြား၍ အခမ်းအနားကို ညနေ ၄ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီ (၂/၂၀၁၆) အစည်းအဝေးကျင်းပ
လက်တွေ့ကျသည့် စီမံကိန်းများ၊ မူဝါဒများ၊ မှန်ကန်စွာချမှတ်၍ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်နိုင်ရန်၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကိစ္စရပ်များအားဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၊ Stakeholders များနှင့် ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အရည်သွေး ပြည့်ဝသည့် အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု Statistical Evolution လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီ (၂/၂၀၁၆) အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ၃နာရီခွဲတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ တွင် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်မူဝါဒများကို မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် အခြေခံရမည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ ရှေ့နောက် ညီညွတ်မှုရှိရန်၊ ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သော ခိုင်မာသည့်စာရင်းအင်းများအဖြစ် အရည်အသွေးပြည့်ဝစေရန်၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်‌အကဲဖြတ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အခြေခံစာရင်းအင်း အချက်အလက်များအပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊
စာရင်းအင်း Data များသည် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အနေအထားအရကွဲလွဲချက်များရှိမည် ဖြစ် သော်လည်းကွဲလွဲချက် တန်ဖိုးနည်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ Data အချက်အလက်များကို မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး မှန်ကန်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက မိမိတို့အနေဖြင့် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် တာဝန်မကျေသည့်သူများ ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောင်းလဲတိုးတက် နေသည့် နည်းစနစ်များကိုအမီ လိုက်ပါပြောင်းလဲ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊
Data များကို လိုအပ်သည့် Processing ပြုလုပ်ပါက သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိလာ မည်ဖြစ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များ၏ စဉ်းစားဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်သည့် စွမ်းရည်များ ပေါင်းစပ်၍ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညှိဆောင်ရွက်ပါကမှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်ရှိခဲ့သော Data အချက်အလက်များသည် အပြည့်အဝယုံကြည် ကိုးစားနိုင်သော စာရင်းအင်းများ မဖြစ်ခဲ့ပါကလည်း တဖြည်းဖြည်းမှန်ကန်လာမည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက် သွားကြရန် ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ လမ်းညွှန်ချက်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီးနောက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ကော်မတီဥက္ကဌ၊ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှာကြားပြီးနိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီး မှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ(National Strategy for Development of Statistics-NSDS) ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
CCBDR Technical Working Group Meeting for Strengthening Birth and Death Registration System
A technical working group meeting for strengthening birth and death registration system was organized led by Director-General of Central Statistical Organization from was 8th to 10th August, 2016 at Central Statistical Office, Nay Pyi Taw. The objectives of the meeting were to improve the completeness of birth and death registration by collaboration of various stakeholders, to improve the quality of Causes of Deaths data, to develop data sharing system among GAD, Immigration, MOHS and CSO.
Laureate Professor Alan Lopez and technical team from the University of Melbourne provided the technical assistance. Senior Officials from General Administrative Department, the Department of National Registration and Citizen, the Department of Population, the Department of Public Health, the Department of Medical Services, the University of Medicine (Mandalay), the Department of Medical Research (Lower Myanmar), the Department of Medical Professional and Human Resource Development and Management, the International Relation Division of MOHS and Central Statistical Organization and the UNICEF and the Vital Strategies teams attended and discussed to collect the birth and death data using scientific and IT techniques.
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) မှ IdCA Questionnaire နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး
နေပြည်တော် သြဂုတ် လ ၉ ရက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) မှ IdCA Questionnaire နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၉)ရက် နေ့တွင်နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၃၂)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါ၀ါမောင်မှ IdCA Questionnaire နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ UNDP နှင့် World Bank တို့သည် မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်း မေးခွန်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်အဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်း
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်
မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်း မေးခွန်းလွှာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ UNDP နှင့် World Bank တို့သည် စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့သည် စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာများ ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်သည့် လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (MSIC)စာအုပ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြုစုထားသည့် စံပြုသင်္ကေတများနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (MSIC) စာအုပ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြုစုထားသည့် စံပြုသင်္ကေတ များနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ရုံးအမှတ်(၃၂)ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိ သူများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားထားသူ ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း( ၁၄၂ )ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စုစည်းမှုများ၊ တင်ပြမှုများတွင် သင်္ကေတအမျိုးအစား အလိုက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သူများ၊ စာရင်းအင်း စုဆောင်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (MSIC)ပါ အတန်းအစားနှင့် လုပ်ငန်းသင်္ကေတများအတိုင်း ရေးသွင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် ဒေသအလိုက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအလိုက်လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလိုက်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ် လေ့လာရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေသည် သာမက အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် - ၂၀၀၈ (SN -2008) ကို တိုင်းပြည် ၏ စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (GDP) တွက်ချက် အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာရောက်ပါသည်။
ယခုပြုစုနေသည့် မြန်မာ့စံပြု သင်္ကေတများ(MSIC)သည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံး၏အပေါ်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ခြုံငုံမိမည်ဖြစ်ပြီး စာအုပ်တွင် မြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီကို ကဏ္ဍ(Section)- ၂၁ ခု၊ ကဏ္ဍခွဲ (Division)- ၈၈ ခု၊ အုပ်စု (Group)- ၂၃၈ ခု၊ အုပ်စုခွဲ(Class)- ၄၆၆ ခုအောက်တွင် စုစုပေါင်းအမျိုးအမည် (Item)-၁၃၂၆ ခု တို့ဖြင့် စုစည်းထားပါသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တက်ရောက်လာသူများမှ ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောထား မှတ်ချက်များကို ပေးပို့ရန်နှင့် လာမည့်ဩဂုတ်လ(၂၀)ရက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကာ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂:၃၀) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
Signing Ceremony of the Collaboration Agreement between the Ministry of Health and Sports and the Ministry of Planning and Finance and the Vital Strategies
Dr. Thet Khaing Win, the permanent secretary of the Ministry of Health and Sports, U Tun Tun Ňainğ, the permanent secretary of the Ministry of Planning and Finance and Mr. Nick Southern, the Country Director of the Vital Strategies signed on the collaboration agreement for Bloomberg Data for Health Initiative in Myanmar. The project is designed to focus on strengthening birth and death registration system and capacity of the staffs. The ceremony was held on 20 July 2016, at the meeting room of the Ministry of Planning and Finance office no.1, Nay Pyi Taw. It is one of the accomplishment of 100 days' plan.
စာရင်းအင်းကဏ္ဍ အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သတ္တမအကြိမ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ (7th Meeting of the Sectoral Working Group on Statistical Quality Development)အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၁၂ရက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များအကြားတွင် စာရင်းအင်းအရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သတ္တမအကြိမ် လုပ်ငန်း ကဏ္ဍဆိုင်ရာ (7th Meeting of the Sectoral Working Group on Statistical Quality Development) အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၀၀)တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ရုံးအမှတ်(၃၂)ရှိ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဝါဝါမောင်မှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စာရင်းအင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိသူများအပါအဝင် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဖိတ်ကြားထားသူ ကိုယ်စားလှယ်(၁၀၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ကြပါသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် လူမှုအသိုက်အဝန်း တိုးတက်ရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ရင်းမြစ်များ မှန်ကန်စွာ ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့ကျသည့် မူဝါဒများချမှတ်ရန်နှင့် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စောင်ကြည့်အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောကိန်းဂဏန်းများနှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များသည် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကိန်း ဂဏန်း အချက်အလက်များကသာလျှင် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဘဝကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် မူဝါဒများ ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိကျမှန်ကန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများသာလျှင် အစိုးသစ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့် မူဝါဒနှင့်စီမံချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်သည် EU- Compass project မှ Consultant Ms. Christine ALBERTI-SCHMITT နှင့်တွေဆုံ
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်သည် EU- Compass project မှ Consultant Ms. Christine ALBERTI-SCHMITT နှင့် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း၌ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် EU- ASEAN Compass တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Euro Trace Software အသုံးပြု၍ အဓိကကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် Mirror Analysis ပြုလုပ်နိုင်စေရန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအင်းများ ပြည်စုံမှန်ကန်စေရန်နှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝစေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစီးပွားရေးဝန်ကြီးနှင့်မန္တလေးတိုင်း အတွင်းရှိဗဟိုစာရင်းအင်းဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ ဆုံ
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဝါဝါမောင်သည် (၄.၇.၂၀၁၆)တနင်္လာနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၌ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ဘာသာရပ် ပို့ချခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ် ပို့ချခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် (၅.၇.၂၀၁၆) အင်္ဂါနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဝါဝါမောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းဇော်တို့သည် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းရုံးနှင့်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ရုံးများ၏လုပ်ငန်း အခြေအနေများကို စစ်ဆေးခဲ့ကာ ခရိုင်/မြို့နယ်များမှ ခရိုင်မှူးများ၊ မြို့နယ်မှူးများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး လိုအပ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ညနေပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးမြတ်သူနှင့် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရ/သုံးမှန်းခြေဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်အတူ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Success in Third Group Training Programme on Production and Statistical Analysis of Monitoring Indicators in Support of Inclusive Development Policies
The “Third Group Training Programme on Production and Statistical Analysis of Monitoring Indicators in Support of Inclusive Development Policies” organized by the Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP), and the Japan International Cooperation Agency – JICA was held in Chiba, Japan during the period of 16 May – 24 June 2016 withatotal of 28 participants from 23 countries including Myanmar. Daw Htay Htay Htun (Staff Officer) and Daw Sann Thi Lwin (Staff Officer) from the Central Statistical Organization under the Ministry of Planning and Finance attended and achieved in this training course. This training course was offered to middle-level government statisticians in order to produce and analyses of official statistics and indicators from household surveys in support of socio-economic disparity analyses comprising the national statistical system in developing countries.
e-Government CSO Template Management System အသုံးပြုရန်အတွက် Data Entry သင်တန်းဖွင့်ပွဲ
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၆ ရက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ e-Government လုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် CSO Template Management System ကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်၊ခရိုင်များနှင့် မြို့နယ်များဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက်တည်ထောင်ရန် ပထမအကြိမ် Template Data Entry သင်တန်းကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ သင်တန်းခန်းမ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ယင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်မာအေးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးများ၊ သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် Data ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာများ သင်ကြားသွားမည် ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၅) ရက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
PARIS 21 Mission အဖွဲ့မှ Peer Review ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာအား တင်ပြခြင်း
နေပြည်တော် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် PARIS 21 Mission အဖွဲ့တို့သည် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာများ တိုးတက်ရန် ပိုမိုအားကောင်းသော စီးပွားရေးမူဝါဒများ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်သူများ လိုအပ်သော စာရင်းအင်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုအားကောင်းစေသည့် Peer Review ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်းကို ယနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၂)ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် ဦးဆောင်သော ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး PARIS 21 Mission အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြရာ တက်ရောက်လာသောဝန်ထမ်းများမှ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။
စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုအားကောင်းအောင် Peer Review အကဲဖြတ်မူဘောင် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆွေးနွေး
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် PARIS21 Mission အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများ တိုးတက်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးမူဝါဒ ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်သူများလိုအပ်သည့် စာရင်းအင်းများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် Peer Review အကဲဖြတ်မူဘောင် (Assessment Framework) အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ကနဦးအစည်းအဝေး (Kick-off Meeting ) ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)ရှိဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအဝေးသို့ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းနှင့် မေခရိုစီပွားရေး စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အောက်ရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ၊ ASEAN Secretariat၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများ၏ စာရင်းအင်းဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ စာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
Discussion for Survey Calendar and Release Calendar Implementation Plan
The meeting of Survey Calendar and Release Calendar led and supervised by Dr.WahWah Maung Director-General Central Statistical Organization was held from 9:30 am to 11:00 am, on 8 June, 2016 in Central Statistical Organization Office. The main purpose of this meeting was NSDS Implementation Plan in Formatting and compiling for Survey Calendar and Release Calendar.
Discussion with Agricultural Statistics Publishing
Agricultural, Fishery and Forestry sector in publishing coordination meeting in the Central Statistical Organization with Agricultural and Rural Statistics Cluster 2016, on June 8 Naypyitaw Office (32) held in the Ministry of Planning and Finance , Central Statistical Organization, Director-General Dr. Wah Wah Maung was to discuss the development of publishing and data points.
Forum on Cascading the Outcomes of Meeting of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee and Other ASEAN Bodies
The “Forum on Cascading the Outcomes of Meeting of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee and Other ASEAN Bodies” was held. The ”Forum on Cascading the Outcomes of Meeting of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee and Other ASEAN Bodies”led and supervised by Central Statistical Organization was held asahost at Thingaha Hotel, from 1:00 PM to 5:00 PM, on 13 May,2016 in Nay Pyi Taw, Myanmar.The main purpose of the forum is to establish ASEAN Community Statistical System(ACSS) and its legal basis structure and composition, functions, activities and decision – making towards relationship withthe Myanmar Statistical System. It includes EU-ASEAN capacity building, and assistance of EU, to becoming strong with respect to quality of statistics among ASEAN and other countries. There is alsoaprogramme for monitoring and integration progress and statistics project known as COMPASS. For this purpose, general discussion was made with exchange of views and experiences during the forum in connection with linking ASEAN Community Statistical System with National Strategy for Development of Statistics(NSDS), with an intention of establishment National Statistical System based on the experiences of ASEAN nations and projects for development of statistics in Myanmar headed by EU. The Forum was attended by the Representatives of ASEAN, dialogue partners and relevant organizations and the line ministries. During the ceremony, Dr.WahWahMaung, the Director General of Central Statistical Organization explained about the Forum, and showed about ASEAN Community Statistical System(ACSS), using Video clip. Similarly, Ms. ElizabethAlarilla, ASENstats (Statistics Division), explained “ASEAN Community Statistical System (ACSS)”, DawKhin Mar Aye, the Deputy Director General of the Central Statistical Organization also gave an explanation as to“The Myanmar In the ASEAN“,Mr.BenjaminArsenio Y. Navarro, Directror of Philippines International Cooperation Unitmade clear concerning “The Philippines in the ASEAN Community Statistical System (ACSS)” ,U Than Zaw,Director of the Central Statistical Organization,gaveabrief explanation about “Statistical System in Myanmar”, Mr.Romesh Paul , the leader of EU-ASEAN Compass Project , gaveadiscussion about “EU-ASEAN Compass Project” and Mr.Romulo A. Virola , EU-ASEAN COMPASS Project Consultant,hadageneral discussion about the “Guidelines on Cascading the Outcomes of Meetings of the ASEAN Community Statistical System Committee(ACSSC) and Other ASEAN Bodies”, respectively, using Power Point.
THE FIFTH SESSION OF THE ASEAN COMMUNITY STATISTICAL SYSTEM COMMITTEE ATTENDED
The Fifth Session of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee held in Cyberjaya, Malaysia, from3to5November 2015 was attended by Dr.Wah Wah Maung, Acting Director General of Central Statistical Organization under Ministry of National Planning and Economic Development.
The ASEAN Heads of Statistics Offices discussed issues on the implementation of the ACSS Strategic Plan, Multi -Year Action Plan, alignment between National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) and long term ACSS Strategic Plan (2016-2025) and promoting technical cooperation for the statistical field among the member states as well as development partners in this meeting.
A total of 126 participants attended this meeting which includes ASEAN Heads of Statistics Offices, ASEAN Secretariat, Members of the ACSS Sub-Committee on Planning and Coordination, Participants from International Organizations and Malaysia's stakeholders and officers from DOSM.
Ceremony of World Statistics Day and Seminar on Development of Statistics
Ceremony of World Statistics Day and Seminar on Development of Statistics was held in MICC- II, Nay Pyi Taw on 20 October 2015. The Union Minister from the Ministry of National Planning and Economic Development made an opening speech at the ceremony. Union Ministers, Deputy Ministers, Chief Advisors to the president, Development Partners, Members of the Coordination Committee of National Strategy for Development of Statistics, NSDS Cluster members, Representatives from the Institutions, Universities, UMFCCI and Civil Society Organization attend at the ceremony.
World Statistics Day is held in every five years. The theme of the World Statistics Day of this year is “Better Data, Better Lives”. Myanmar Statistical Information Service - MMSIS website (mmsis.gov.mm) was launched in this ceremony. MMSIS website is being built by Central Statistical Organization (CSO) with the assistance of Korea International Organization Agency – KOICA. Mr. Bertrand Bainvel (UN Resident Coordinator ad interim), read out the Message from UNHQ for World Statistics Day.The important role of statistical development in Myanmar showed with video clip. In the discussion session; U Myint, chief advisor to President, facilitated asamoderator for the topic of “Better Data, Better Lives”. Dr. Zaw Oo, advisor to President, facilitated asamoderator for the topic of “Developing Macroeconomic Statistics”. U Tin Htut Oo, the chairman of social and economic advisory council, facilitated asamoderator for the topic of “Developing Agriculture, Trade and Investment Statistics”. Dr. Thein Thein Htay, deputy minister from the Ministry of Health, facilitated asamoderator for the topic of “Developing Social and Vital Statistics in Myanmar”. After that, the audience raises the questions which they would like to know and the moderators and panelists responded to their questions.
Technical Consultation Workshop on Dissemination of Statistical Information in Myanmar
Technical Consultation Workshop on Dissemination of Statistical Information in Myanmar was held at the meeting room of Office No.(32) on 2nd October 2015 in Nay Pyi Taw. During the meeting, they discussed matters about the launching the www.mmsis.gov.mm website to developastatistical data accumulation and dissemination system, to provide it to users in more efficient ways and to strengthen the capacity development of statistical personnel.
U Tun Tun Naing, Permanent Secretary of Ministry of National Planning and Economic Development, Dr.Wah Wah Maung, Acting Director General of Central Statistical Organization, KOICA Representatives, Project Manager of Korea Statistical Promotion Institute (KSPI), General Manager of Nurimsoft Co.,Ltd, the government officials from the line ministries and from statistical units attended the meeting.
Workshop on Agricultural and Rural Statistics
Agricultural and rural statistics cluster which is one of cluster of the National Strategy for Development of Statistics (NSDS) organizedaWorkshop on Strategic Planning for Implementation of Global Strategy to improve Agricultural and Rural Statistics in Myanmar through the assistance of Food and Agriculture Organization (FAO) in Hotel Max, Nay Pyi Taw on 25th August 2015. Dr. Wah Wah Maung Acting Director General,CSO delivered the opening speech.
Durning the workshop, the attendces openly discussed on the strategic objectives, setting up the roadmap identification the requirenmen to for improvenent of agricultural and rural statistics. Representatives of FAO, NSDS Experts from World Bank, members of Agricultural and rural statistics cluster, government officials from the line ministries attended the workshop.
Discussion with WB-IMF-ADB Joint Team for NSDS Core Strategies
National Strategy for Development of Statistics Coordination Committee (NCC) met with WB-IMF-ADB Joint Team at the meeting room of Office No. (32), Central Statistical Organization on 25th August 2015.During the meeting, they exchanged views on the Core Strategies of National Strategy for Development of Statistics (NSDS). Dr. Wah Wah Maung, acting Dircetor General of Central Statistical Organization, and the government officials from the line ministries attended the meeting.
Third Forum on Accelerating Birth Registration in Myanmar
The Third Forum on Accelerating Birth Registration organized by Ministry of Immigration and Population, Ministry of Health, Central Statistical Organization, Ministry of National Planning and Economic Development, Ministry of Home Affairs, EU and UNICEF was held in Hotel Royal ACE, Nay Pyi Taw ,Myanmar on 24th August. The Forum was attended by 100 participants from World Bank, IMF, ADB, WHO, UNFPA, UNHCR, Australian Aid, JICA and (13) CCBDR committee members. The objectives of the Forum are to identify strategies for accelerating birth registration in Myanmar, based on:
1.Appeal the technical aids, financial assistance from the Development Partners and Donor countries for the conduct of birth registration campaigns in remaining 8 States/Regions to register all under- five children in Myanmar;
2. Progress made on installation of E-platform and its benefit for civil registration system;
3. Highlighting the roles of and the benefits civil registrar general for the country
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ လစဉ်စီးပွားရေး အညွှန်းကိန်း စာစောင် (Selected Monthly Economic Indicators) ကို ပြည်ပကုန်သွယ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဈေးနှုန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာမှု၊ လုပ်သားနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး စသည့်ကဏ္ဍများ စုံလင်စွာဖြင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ထုတ်ဝေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် တစ်အုပ်လျှင် ကျပ် ၅ဝဝဝ တိတိနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော နေရာများ -ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်၊ Junction Super Markets နေပြည်တော် ၊ ခြံအမှတ်(၁)၊ သစ္စ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ) နှင့် စာပေဗိမာန် အရောင်းဆိုင် (နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့)တို့တွင် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ဝ၆၇-၄ဝ၆၃၃ဝ၊ ဝ၆၇-၄ဝ၆၃၂၅၊
ဝ၆၇- ၄ဝ၆၄၆၈၊ ဝ၁ – ၆၅၇၃ဝ၇
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကြောင့် နေ့စဉ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေများအား ပြုစုတင်ပြခြင်း
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတိုတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မြစ်ရေကြီးမှုများ၊ ချောင်းရေကြီးမှုများ၊ တောင်ကျရေ ကျဆင်းမှုများနှင့် အနိမ့်ပိုင်းရေလွှမ်းမှိုးမှုများ၊ လမ်းတံတားပျက်စီးမှုများ၊ လူသေဆုံးမှုများ၊ အဆောက်အဦ ပျက်စီးမှုများ၊ ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံ၊ ကျန်းမာရေးဌာန စသော အဆောက်အဦ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ သာသနိက အဆောက်အဦ ပျက်စီးမှုများ၊ လယ်ယာမြေပျက်စီးမှုများ၊ တိရစ္ဆာန်များ သေကျေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ အပြင် လေပြင်းများ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေများအား အမျိုးသားသဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အောက် ရှိ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတည်ပြုရေး ဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များမှ နေ့စဉ်ပေးပို့လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုစာရင်းနှင့် အခြေအနေ များအား နေ့စဉ် ဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေများအား အမျိုးသား သဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြလျက်ရှိသည်။
Korea Statistics Promotion Institute (KSPI) Team discusses for the Development of Statistics through IT
Acting Director General of Central Statistical Organization, Dr. Wah Wah Maung received Korea Statistics Promotion Institute (KSPI) team at the meeting room at Office No. 32, Central Statistical Organization, on 16th June 2015. They disscussed the matters on cooperation for “The Project of Capacity Building through IT based Statistical Data Management in Myanmar” between Central Statistical Organization (CSO) and Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Second Workshop on the Regional Initiative on Support to the Zero Hunger Challenge in Asia and the Pacific
The Second Workshop on the Regional Initiative on Support to the Zero Hunger Challenge in Asia and the Pacific was held in Bangkok, from 11th March to 12th March,2015 and organized by FAO Regional Office for Asia and the Pacific.In that Workshop, (20) participants from (5) countries including (2) from Myanmar were attended. The objectives of the workshop are -
• To take stock of progress since the inception workshop for the Regional Initiative held in September 2014, and agree upon outputs to be produced by the end of March 2015;
• To identify lessons learned and discuss the way forward, including priority follow-up actions and additional resource mobilization requirements; and
• To revise the present country workplans and budgets to accelerate the implementation of the Regional Initiative with necessary adjustments in order to achieve its medium –term goals.
National Statistical Development Strategy (NSDS) Coordination Committee Meeting
Nay Pyi Taw, 4th February
Daw Lai Lai Thein, Deputy Minister, Ministry of National Planning and Economic Development, members from Line agencies and delegates from ADB and World Bank were attended Statistical Working Committee to organize National Statistical Development Strategy (NSDS) Coordination Committee.
Success in Advance Certificate Course in English Language & IT Proficiency,
29th October 2014 to 5th January 2015
Advance Certificate Course in English Language & IT Proficiency was opened in Shriram Institute of Business and Information Technology (SIBIT), New Delhi, India from 29 October, 2014 to5January, 2015. U Kyaw Than Min (Deputy Statistician) from Central Statistical Organization, Ministry of National Planning and Economic Development, the Republic of the Union of Myanmar attended and achieved in this training course. This training tends to improve English language and IT proficiency skill.
Success in Brunei-U.S. English Language Enrichment Programme
for ASEAN (2014), 8 September to 22 November, 2014
Brunei-U.S. English Language Enrichment Programme for ASEAN (2014) was opened in University of Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam and in East-West Center, Honolulu, United States of America from 8 September to 22 November, 2014. A total of 68 participants from ASEAN countries, expect from Singapore were attended in this training. Daw Nyo Mar Aung (Programmer) and Daw Saw Yu Win (Deputy Statistician) from Central Statistical Organization, Myanmar attended and achieved in this training programme. This training tends to improve English language proficiency skill and to corporate with highly qualified leadership among ASEAN countries.
Success in Second Group Training Program on Improving Capability in Producing Official Statistics Relating to MDGs Indicators, 18 August to 19 December,2014
Second Group Training Program on Improving Capability in Producing Official Statistics Relating to MDGs Indicators (Junior-Middle Level) was opened in SIAP, Chiba in Japan with the sponsored by ADB, from 18 August to19 December, 2014. A total of 18 participants from 12 countries were attended in this training. U Kyaw Sai Htut (Deputy-Statistician, Central Statistical Organization), Daw Thinzar Mon (Deputy-Statistician, Central Statistical Organization) and Daw Thandar Soe (Deputy-Statistician, Central Statistical Organization) from Myanmar attended and achieved in this Training Programme. This Training tends to improve capability in producing official statistics relating to MDGs indicators.
စာရင်းအင်းပညာ အသုံးပြုမှုသင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စာရင်းအင်းပညာ အသုံးပြုမှု သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်၌ကျင်းပရာ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့သိန်း တက်ရောက်သင်တန်းဆင်း အမှာစကားပြောကြားသည်။ အခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့သိန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ကိုယ်စားလှယ် Daisuke Mizusawa၊ သင်တန်းနည်းပြများနှင့် သင်တန်းသား/သူများ တက်ရောက်ကြသည်။ အစီအစဉ်အရ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့သိန်းနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ကိုယ်စားလှယ် Daisuke Mizusawa တို့က သင်တန်းဆင်း အမှာစကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့သိန်း၊ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တို့က သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များကို သင်တန်းသား/သူများထံ ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါ သင်တန်း၏ Phase I ကို( ၁၁-၆-၂၀၁၄ ) မှ ( ၄-၇-၂၀၁၄ ) အထိလည်းကောင်း၊ Phase II ကို (၁၉-၈-၂၀၁၄) မှ (၁၂-၉-၂၀၁၄) အထိလည်းကောင်း၊ Phase III ကို (၁-၁၂-၂၀၁၄) မှ (၁၉-၁၂-၂၀၁၄)အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Time Series and forecasting, Income Statistics and Poverty Measure, Human Development Index နှင့် Social Statistics and Millenmium Development Goals ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Success in Post Graduate Diploma Course for Human Resource Planning and Development
Post Graduate Diploma training course in Human Resource Planning and Development was conducted in Institute of Applied Manpower Research, New Delhi in India with the financial assistance of Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC), from 3rd March to 25th August, 2014. A total of 30 trainees from 19 countries, including Daw Aye Mya Wai, Deputy-Statistician from Central Statistical Organization under the Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar were attended in this training and all trainees were successful completed. This training tends to develop the capacity of civil services in developing countries.
Study tour to the Philippines Statistics Authority (PSA)
The study tour of Myanmar official group,4officials from Central Statistical Organization and3officials from Department of Labour, to Philippines Statistics Authority (PSA) was conducted from 4-8 August 2014 in Manila, Philippines. The study tour programme was arranged and sponsored by International Labour Organization(ILO) Myanmar Office.
The objectives of the study tour are:
(1) To be aware that the PSA has excellent professional credentials in the statistical community and it has past experience in conducting Laour Force Surveys and National Child Labour Surveys.
(2) To provide hands-on training, exposure and capacity building support to the delegation.
(3) To conduct successfully the Myanmar Labour Force, Child Labour and School to Work Transition Survey (LF-CL-SWTS) by jointly associated with Central Statistical Organization and Department of Labour.
Holding the Second Meeting of the Sectoral Working Group on Statistical Quality Development
Second Meeting of the Sectoral Working Group on Statistical Quality Development was held at (9:30) a.m at the meeting room of National Planning and Economic Development at Office Building No.(32), Nay Pyi Taw on 31stJuly, 2014. This meeting aims to develop the statistical quality and system, to coordinate within government agencies and linkages between the Statistical Quality Development Sectoral Working Group and the high level Committee for Accurate and Quality Statistics and to update on priorities and plans of the Government in the area of Statistical Quality Development, including the draft of the National Strategy for the Development of Statistics (NSDS). Officials from CSO and related Ministries and represents from UNFPA, World Bank, ADB, EU, ILO, IMF, UNICEF, KOICA, UNDP attended to this meeting.
The Sub-Committee Meeting on the Collecting, Compiling and Analyzing of the Statistical Data for Poverty Alleviation and Rural Development
The Sub-Committee Meeting on the Collecting, Compiling and Analyzing of the Statistical Data for Poverty Alleviation and Rural Development was held at the Ministry of National Planning and Economic Development on4August 2014. The meeting was attended by Minister U Ohn Myint for Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development, Minister Dr. Kan Zaw for Ministry of National Planning and Economic Development, Deputy Minister Dr. San Lwin and Daw Lei Lei Thein from MNPED, Economic Ministers for States and Regions including Nay Pyi Taw Council, Director Generals, Members of the Collecting, Compiling and Analyzing of the Statistical Data for Poverty Alleviation and Rural Development Sub-Committee and Responsible Persons of Government Officials. The primary objectives of the meeting is to adopt the future programmes need to be carried out and also the Rural Development and Poverty Alleviation Indicators compiled by the Ministries , State and Region.
The working committee of statistical data meeting
Meeting on the working committee of statistical data by Ministry of National Planning and Economic Development was held in5August 2014.
The meeting was attended by Deputy Minister Daw Lei Lei Thein for National Planning and Economic Development, Economic Ministers of States and Regions including Nay Pyi Taw Council, Director Generals, Members of the Working Committee of Statistical Data and Responsible Persons of Government Officials.
The meeting coordinate and discuss the future programmes need to be carried out and also to coordinate and discuss on the implementation of the decisions or comments of the Committee of accurate and quality of statistics and third meetings of the Working Committee of Statistical Data.
Success in First Group Training Programme on Production and Analysis of Monitoring Indicators in Support of Inclusive Development Polices,19 May – 27 June,2014
First Group Training Programme on Production and Analysis of Monitoring Indicators in Support of Inclusive Development Polices was opened in SIAP, China in Japan with the sponsored by ADB, from 19 May to 27 June, 2014. A total of 19 participants from 10 countries were attended in this training. Daw Zar Kyi Win (Deputy-Statistician, Central Statistical Organization) and Daw Tin Mar Su (Deputy-Statistician, Central Statistical Organization) from Myanmar attended and achieved in this Training Programme. This Training tends to enhance the knowledge and skills of participants in using statistical techniques on survey data to shed light on disparities and inequalities.
Success in 2013 Ewha-KOICA Master's Program in International Studies (Women and Development)
The Master’s Degree Program in International Studies (Women and Development) was opened in Seoul, Korea from 4th February, 2013 to 15th June, 2014 at Graduate School of International Studies, Ewha Womans University withatotal of 30 participants from 22 countries. Daw Htin Muyar Kyaw (Staff Officer, Foreign Economic Relations Department) and Daw Htay Htay Htun (Deputy Statistician, Central Statistical Organization) from Myanmar attended and achieved in that Master Program. This program tends to share the Korean experience and knowledge with other developing Countries, to empower women leaders to enhance the intellectual mindset and talent of their home country’s human resource capabilities and to strengthen partnership with participating countries and Korea.
Statistical Training opens
The Statistical Training sponsored by Asian Development Bank ( ADB ) was opened on 11th June 2014 at Central Statistical Organization. The opening ceremony of the training was attended by U San Myint , Acting Director-General of Central Statistical Organization(CSO), Daw Marlar Aung , Deputy Director-General of C S O, Mr. Kaushal Joshi , Senior Statistician of ADB, Directors of CSO, U Khin Kyu ,National Consultant of ADB and U Tin Aung ,Local Consultant of ADB and 25 trainees from Statistics Related Departments .
The objective of the training is Capacity Development of National Statistical System. The Training will be conducted from 11th June to 4th July 2014. With the assistance of ADB , the Statistical Trainings will be conducted continuously.
Launching Ceremony of the Project of Capacity Building Through IT Based Statistical Data Management in Myanmar
Launching Ceremony of the Project of Capacity Building Through IT Based Statistical Data Management in Myanmar, which will be implemented by collaboration of CSO and KOICA, was held at (10:00)a.m at Office Building No.(32), Nay Pyi Taw on 11th February, 2014.
Officials of CSO, Mr.CHO, Sunghoon, Deputy Resident Representative of KOICA Myanmar Office and Mr.Gyungtae Kim, Secretary-General of Korea Statistics Promotion Institute and (6) Korean Statistical Experts attended to this ceremony.
အိမ်ထောင်စု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေးအတွက် စာရင်းကောက်ယူခြင်း စစ်တမ်းတို့ကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ကောက်ယူပါမည်
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်
အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် အိမ်ထောင်စု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စစ်တမ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေးအတွက် စာရင်းကောက်ယူခြင်း စစ်တမ်းတို့ကို ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်မှစ၍ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအဝင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ အားလုံးတွင် ကောက်ယူ မည် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်စု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်း ကောက်ယူရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ-
(၁) တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက်၊ မြို့နယ်များတွင် မြို့မ/ ကျေးလက် ခွဲခြား၍ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်။
(၂) တိမ်မြုပ်နေသော တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Informal Sector Business) များကို သိရှိခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်၏ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှု (GDP) ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ရရှိနိုင်ရန်။
(၃) တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ (National Accounts) ကို အခြား နိုင်ငံများ နည်းတူ 2008 SNA စနစ်ဖြင့် တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုစာရင်း များ ရရှိနိုင်ရန်
ကောက်ယူ ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအားလုံး (နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အပါအဝင်) ရှိ နမူနာမြို့နယ်ပေါင်း (၈၂)မြို့နယ်၏ နမူနာရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် နမူနာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃၂၈,၀၀၀) ကို စစ်တမ်းကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါစစ်တမ်းကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများက ကြီးကြပ်၍ သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ယာယီစာရင်းကောက်များက ပါဝင်ကောက်ယူမည် ဖြစ်ပြီး နမူနာ တစ်မြို့နယ်လျှင် နမူနာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၄၀၀)ကို (၈)ရက်ကြာ ကွင်းဆင်း ကောက်ယူ မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ပုဂ္ဂလိက စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် ဒေသအသီးသီးရှိ စက်မှုဇုန်များ၏ တိုးတက်မှု ကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ၍ ထောက်ကူမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP) တွက်ချက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်။
(၃) ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် အခြားလောင်စာဆီ သုံးစွဲမှု၊ အလုပ်သမားများ၏ ပညာအဆင့်အတန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု စသည့် အချက် အလက်များ သိရှိရန်။
(၄) စက်စွမ်းအားအသုံးချမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု အလားအလာနှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များကို သိရှိရန်။
(၅) နိုင်ငံခြားငွေကို သက်သာစေမည့် သွင်းကုန်အစားထိုးလုပ်ငန်းများ၊ ပို့ကုန် မြှင့်တင် ပေးမည့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေး အတွက် စာရင်းကောက်ယူခြင်းစစ်တမ်းကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိ စက်မှုဇုန် (၂၉) ဇုန်မှ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကို အပြည့်ကောက်ယူသောနည်း (Complete Enumeration) စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းပေါင်း (၉,၁၃၀) ကို ကောက်ယူမည်ဖြစ်ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများက ကြီးကြပ်၍ စက်မှုဇုန် အသီးသီးရှိ ဇုန်တာဝန်ခံ ရုံးဝန်ထမ်းများက စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်စု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းတွင် ကောက်ယူမည့် အချက်အလက် များမှာ အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်လုပ်သူများမှ အိမ်ထောင်စု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သူ ဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အလုပ်လုပ်သူ ရာခိုင်နှုန်း၊ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်း၊ လုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလုပ်လုပ်သူများ၏ ပညာရေး အခြေအနေတို့အပြင် ဝင်ငွေအတန်းအစားအလိုက် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ကိုင်သူများ ရာခိုင်နှုန်း စသည့် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေးအတွက် စာရင်းကောက်ယူရေး စစ်တမ်းတွင် ကောက်ယူမည့် အချက်အလက်များမှာ လုပ်ငန်းအလိုက် အဖွဲ့အစည်းပုံစံ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး၊ လုပ်ငန်းအလိုက် လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားရှိမှု၊ နိုင်ငံခြား/ မြန်မာ နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်လုပ်သူဦးရေ၊ ပညာရေး အခြေ အနေ၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးများ၊ ဝန်ဆောင်ခရငွေ၊ အသုံးပြုသောစက်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှု၊ လိုအပ်ချက်နှင့် သုံးစွဲမှု၊ လုပ်ငန်းအလိုက် စက်စွမ်းအား အသုံးချမှုနှင့် အသုံးချနိုင်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်ငန်းအလိုက်ဝင်ငွေ၊ ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးရရှိမှု၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများတန်ဖိုး၊ ကုန်လက်ကျန်တန်ဖိုး၊ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မည့် အခြေအနေ စသည့် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူ ကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တိကျ မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုပေးကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကောက်ယူပြီးသော စာရင်းဇယား၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို အထူး လျှို့ဝှက် ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဌာနကိုမှ တစ်ဦးချင်း အချက်အလက်ကို ထုတ်ပြန် ပေးမည် မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုအဖြစ် ပျမ်းမျှ အချက်အလက်ကိုသာ ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြည်သူကို ဗဟိုပြုသော ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်း (SME) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်နှင့် တိကျသော အခြေခံစာရင်းအင်း အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပါ စစ်တမ်း(၂)မျိုးကို ကောက်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ လူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် အဓိကကျသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသဖြင့် ပြည်သူလူထုများက တိကျ မှန်ကန်စွာ ဖြေကြားပေးခြင်းဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ပါဝင် ကူညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
Signing Ceremony of Record of Discussion between Ministry of National Planning and Economic Development and Korea International Cooperation Agency (KOICA)
Record of Discussion on the project of capacity building through IT based statistical data management in Myanmar was signed and exchanged, before H.E Daw Lei Lei Thein, Deputy Minister for National Planning and Economic Development, between U Tun Tun Naing, Director General, Central Statistical Organization, on behalf of Ministry of National Planning and Economic Development, and Mr. Nam, Kwon Hyoung, Chief Representative, on behalf of Korea International Cooperation Agency (KOICA) at (9:30) a.m. at office No.(32), Nay Pyi Taw on 27th December, 2013.
Handover Ceremony Of European Union (EU) of Eurotrace Software and IT Equipment to the Central Statistical Organization (CSO)
Handover Ceremony of European Union (EU) of Eurotrace Software and IT Equipment to the Central Statistical Organization (CSO) for improving international merchandise trade statistics at Ministry Of National Planning and Economic Development, Office No.(1), Meeting Room, Nay Pyi Taw on 26th November, 2013.
Union Minister and Deputy Minister for Ministry of National Planning and Economic Development, official persons of CSO and H.E Mr.Roland Kobia, Ambassador of European Union and members attended to this ceremony.
Conference On Market Surveillance
The conference on market surveillance sponsored by Ministry of Trade and Industry was held in Hanoi, Vietnam on6November 2013. The objectives of the conference were –
-to utilize the potential, to narrow the development gaps between CLMV as well as accelerating the implementation of the CLMV action plans
-to know the technique which could enhance economic and trade cooperation among CLMV
The conference was attended by (8) participants from CLMV and 90 officials from Ministry of Trade and Industry.
A coordination meeting on General Data Dissemination System (GDDS)
A coordination meeting on General Data Dissemination System (GDDS) was held at the meeting room of Central Statistical Organization on 25.10.2013 attended by two economist of IMF, Mr. Jisung Moon and Mr. Ulhas Gunjal, responsible personnel from Planning Department, Budget Department, Labour Department, Department of Population and Central Statistical Organization.
In this meeting, two economists discussed on Meta Data development. The meeting was attended by 16 officials from six Departments.
Meeting on Productivity and New Data Challenges for Developing Countries
In collaboration with the United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and the United Nations Statistics Division (UNSD) organized by the National Bureau of Statistics , china meeting on Productivity and New Data Challenges for Developing Countries was held from 24 to 26 October in Tianjin of China.
34 participants from 30 countries including 1 participant from Myanmar were attended in that seminar. How capacity development efforts could be designed and geared up to assist the development countries to meet these new challenges were discussed in the meeting.
The Sixth Regional Workshop on Statistical Quality Management and Fundamental Principles of Official Statistics
The Sixth Regional Workshop on Statistical Quality Management and Fundamental Principles of Official Statistics was conducted from 30 September to4October 2013 in Quezon City, Philippines by the Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP) in collaboration with the United Nations Statistics Division (UNSD) and the Philippine Statistical Research and Training Center (SRTC).
Altogether 22 participants including 1 participant from Myanmar were attended in that workshop. The objective of the workshop is to review guidelines for the template for generic national quality assurance framework (g-NQAF), and evaluate the extent to which elements proposed by g-NQAF are assured in the statistical organizations and discuss possible options for approaches to operationalizing of the template in national statistical systems of ESCAP member states.
In collaboration with The Badan Pusat Statistik, Republic of Indonesia ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Economic Cooperation Work Programme (AANZEFTA-ECWP) and USAID Technical Assistance and Training Facility, International Seminar on Trade and Tourism Statistics, 2013 was held from7to 10 October in Jakarta.
In the seminar, (3) from APEC Secretariat, (3) from ASEAN Secretariat, (1) from OECD, (1) from WTO, (1) from UNWTO, (2) from UNSD and (75) participants from (24) countries including (5) from Myanmar, altogether (86) participants were attended. The objectives of the seminar are to promote statistics on trade in services and networking among statistics experts and specific attention will be given to travel and tourism related services, which is among the priority sectors for ASEAN integration. Trade and Tourism Statistics were discussed in the seminar.
2013 Seminar on Statistics and Information Management for Developing Countries
The Ministry of Commerce (MOFCOM), People’s Republic of China in collaboration with Academy for International Business Officials (AIBO), Seminar on Statistics and Information Management for Developing Countries, 2013 was held from4to 24 September in Beijing.
24 participants from 21 countries including 1 participant from Myanmar were attended in that seminar.
Economic Statistics, Data Mining and Introduction of Information Management were discussed in the seminar.
The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), in cooperation with the United Nations Population Fund (UNFPA), the Sixth Asian and Pacific Population Conference was held from 16 to 20 September 2013 in Bangkok. (326) participants from (47) countries including (7) participants from Myanmar and (99) participants from (57) organizations, altogether (425) participants were attended in that conference. The objectives of the conference are to:
(1) Review population and development trends in the Asian and Pacific region;
(2) Review progress in the regional implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development; and
(3) Serve as an intergovernmental platform to consider and adopt the Asia-Pacific regional input for the General Assembly special session on the International Conference on Population and Development beyond 2014.
2013 Seminar on Global E-Commerce and Economic Information Collection for Developing Countries
Seminar on Global E-Commerce and Economic Information Collection for Developing Countries, 2013 was held on 21 August to 10 September in Beijing hosted by the Ministry of Commerce (MOFCOM), People’s Republic of China in collaboration with Academy for International Business Officials (AIBO) and China International Electronic Commerce Co.Ltd (CIECC).
24 participants from 13 countries including2participants from Myanmar were attended in that seminar.
Trained E-Business, Data Mining and Introduction of Application Software were discussed in the seminar.
In-country Training on fundamentals of Statistical Analysis with Application to Social Statistics
In collaboration with the statistical Institute for Asia and the Pacific and the Central Statistical Organization(CSO), Ministry of National Planning and Economic Development held In-Coutry Training on Tabulation and Analysis of Myanmar Population and Housing Census Data for Monitoring progress towards Development Goals at Royal Nay Pyi Taw Hotel within9September 2013 to 13 September 2013.
In this training, Resource Persons, Mr.Arman Bidarbakht Nia and Mr.A.P Gamina.S.Desilva discussed basic concepts and definitions of Population and Housing Censuses, International Standards for Tabulation of PHC, In-depth Analysis of Myanmar 2014 PHC questionnaire.
The training was attended by 25 participants from Statistical related departments.
In Collaboration with the statistical Institute for Asia and the Pacific and the Central Statistical Organization CSO, Ministry of National Planning and Economic Development held In-country Training on fundamentals of Statistical Analysis with Application to Social Statistics at Royal Nay Pyi Taw Hotel within 26 August to 30 August 2013.
In this Training, Resource Persons Mr. Arman Bidarbakht Nia and Mr. A.P Gamina.S.Desilva discussed Using Excel for Analyzing Survey Questionnaires, Organizing and graphing data, descriptive Statistical Analysis.
The training uses attended by 25 participants from Statistical related departments.
Training on Improving the Consumer Price Index
Under the Statistical Department of the International Monetary Fund (IMF), in collaboration with CSO, Ministry of National Planning and Economic Development and IMF, held training on Improving the Consumer Price Index at Central Statistical Organization within 23 July to2August 2013.
In this workshop, Price Index consultant Mr. Keith Woolford of the Statistical Department of the International Monetary Fund discussed Area samples and CPI Item structure.
The training was attended by 18 participants from Central Statistical Organization.
5th Meeting of the Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination and Communication of Statistics
The Fifth Meeting of the Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination and Communication of Statistics (WGDSA) was held on 1-2 August 2013 in Kuala Lumpur, Malaysia, hosted by the Department of Statistics, Malaysia (DOSM) in collaboration with the ASEAN Secretariat and the GIZ Project.
Members of the WGDSA of ASEAN Member States, GIZ Consultants and ASEAN Secretariat were attended in that meeting.
The Meeting discussed to improve rules and procedures on ASEAN Statistics Data Sharing, Confidentiality and Dissemination.
International Workshop on Industrial Statistics co-organized by the National Bureau of Statistic of China (NBS), the United Nations Statistics Division (UNSD) and United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) was held in Beijing, China during 8-10 July 2013.
27 participants from 15 countries including2participants from Myanmar and 44 participants from China, altogether 71 participants were attended in that workshop. The workshop aims to enhance the capacity of National Statistical Offices of Asian countries in the area of industrial statistics.
International Merchandise Trade Statistics: Eurotrace Implementation Training
In collaboration with Central Statistical Organization and EU, International Merchandise Trade Statistics: Eurotrace Implementation Training was held at Central Statistical Organization on 8-11 July, 2013. Altogether (8) participants , (2) participants from Customs Department and (6) participants from CSO were attended in that training.
The main objective is to provide introductory training to CSO statistical staff using of Eurotrace Software and build the DataSet and Dictionaries for error checking of IMT data statistics in Myanmar.
International Merchandise Trade Statistics: Training in Mirror Analysis
In Collaboration with Central Statistical Organization and EU, International Merchandise Trade Statistics: Training in Mirror Analysis was held at Central Statistical Organization on 2-9 May, 2013. Altogether 12 participants from CSO were attended in that training.
The main objective of this training is to check Asymmetry statistics and reason for discrepancies between trade data and Mirror Statistics among the Myanmar and partner countries with Eurotrace software.
International Workshop on DDI Metadata Standard and IHSN Mircodata Management Toolkit
International Workshop on Data Documentation Initiative (DDI) Metadata Standard and International Household Sruvey Network(IHSN) Mircodata Management Toolkit co-organized by the National Bureau of Statistic (NBS) of China, the United Nations Statistics Division (UNSD) and the World Bank was held in Beijing, China during 17-19 June 2013.
Altogether 76 participants, 27 participants from 12 countries and 49 participants from China including2participants, from Myanmar were attended in this workshop.
The Workshop aims to strengthen the technical capacity of National Statistical Offices of Asian countries to document, catalog and publish survey microdata.
Openning of International Merchandise Trade Statistics: Eurotrace Beginner Training at CSO
In collaboration with Central Statistical Organization and International Management Group (IMG), International Merchandise Trade Statistics: Eurotrace Beginner Training was held at Central Statistical Organization on 18-25 March, 2013. (10) trainees from CSO were attended in that training.
The main objective is to provide introductory training of the implementation ofaEurotrace domain to CSO staff for the Compilation of International Merchandise Trade Statistics (IMTS)of Myanmar.
Under the Statistical Department of the International Monetary Fund (IMF), in collaboration with CSO, Ministry of National Planning and Economic Development and IMF, held training on Improving the Consumer Price Index at Central Statistical Organization within 4-15 March 2013.
In this workshop, Price Index consultant Mr. Keith Woolford of the Statistical Department of the International Monetary Fund discussed the International CPI Manual, A Guide to the Consumer Price Index and Quality Adjustment.
The training was attended by 10 participants from Central Statistical Organization.
Coordinating Meeting with MNPED and the Companies which entrust Software Programs
To promote e-government activities, respective Departments under the Ministry of National Planning and Economic Development and the Companies which are obligated to write Software Programs for those Departments are holding coordinating meeting at Central Statistical Organization Meeting Room at 10:00 AM, February 18, 2013. At the meeting, Deputy Minister, U Sat Aung, acts asaleader, discussed with responsible persons from Department under the Ministry of National Planning and Economic Development, Information Matrix Company, Wi Fi Company to finish in time the entrust Software Programs.
International Merchandise Trade Statistics: Training in Data Quality Assurance
In Collaboration with Central Statistical Organization and EU-ASEAN, International Merchandise Trade Statistics: Training in Data Quality Assurance was held at Central Statistical Organization on 20-21 February, 2013. (10) trainees from CSO were attended in that training.
Copyright © 2008 Central Statistical Organization. All rights reserved.
Designed By MIT Pte. Ltd.